Allgedo.com » 2013 » February » 04
Home » Archive Daily February 4th, 2013
Ex. Xildhibaan Hilowle Aden oo ka warbixiyey kulan ka dhacay Magaalada Kismaayo oo looga hadlayey Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka (Dhageyso)
Hilowle Aden Maxamuud oo horey uga mid ahaan jiray barlamaankii dowladdii Ku Meel Gaarka aheyd ee Soomaaliya ayaa waxaa uu ka mid yahay wafdi ka socda beesha SADE oo isugu jira Xildhibaano, Odoyaal Dhaqameed, Siyaasiyiin iyo Wax garad kasoo jeeda Beesha SADE ee Gobolka Gedo oo ka yimid Muqdisho, kuwaasoo maalintii labaad ku sugan magaalada Kismaayo. Xubnaha Wafdigan oo markoodii hore u tagey Kismaayo...
Maamulka Dowlada ee Gobolka Sh/Dhexe oo ku hanjabay in ay la wareegi doonan Degmooyinka Mahadaay iyo Raage Ceelle
Maamulka Gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay inay qorsheynayaan dhawaan dib ula wareegida Garoonka diyaaradaha ee Degmada Jowhar iyo sidoo kale Degmada Mahadaay ee Gobalkaasi. Sida uu Idaacada Risaala ee Magaalada Muqdisho usheegay Guddoomiye ku xigeenka Gobalka Shabeelaha Dhexe Yuusuf Cabdi Cabdile ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa qorsheynaya inay dhawaan gaaraan Garoonka diyaaradaha...
Beeraleyda Baardheere oo Sanadkan goostey Miro aad u tiro badan.
Beeraleydan Roob falatada ee ku dhaqan degmada Baardheere iyo tuullooyinka hoos yimaada ayaa markii ugu horeysay mudo 4sano ka badan waxay rajo wanaagsan ay ka muujiyeen in sanadkani ay goosteen dalag aad u tiro badan oo isugu jira Masego Moordi iyo Sisin,iyagoo sheegayna Dalagyada u soo go,ay oo uu u tiro badan in u wax weyn uu ka bedeli doono nolosha kumanaan qoys oo ku dhaqan deegaanka...
Rag la sheegay in ay Ka Dambeeyeen Bam lagu Tuuray Ciidamo iyo Gaari ay wateen oo la soo Bandhigey.
Saraakiisha dhanka ammaanka ee Degmada Xamarweyne ayaa maanta soo bandhigay labo ruux iyo gaari nooca caasiga loo yaqaan oo ay sheegeen in laga soo dhextuuray bam gacmeed ciidamo ka tirsan Dowladda lagu weeraray. Taliyaha ciidamada Degmada Xamarweyne Maxamed Daahir oo maanta warbaahinta kula hadlay degmadaasi ayaa wuxuu sheegay in labada ruux ay kala yihiin wadihii gaariga iyo ninkii lahaa, isaga oo...
Burcad Badeed Soomaali ah oo lagu Xukumay Dalka Faransiiska.
Maxkamad ku taala magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska ayaa xukun u dhaxeeya afar ilaa sideed sano ku riday afar qof oo Burcad badeed Soomaali ah oo lagu helay dambi ah afduubka dooni Faransiiska ay leeyihiin iyo labo qof oo saarnaa doonta. Waxaana wararka intaasi ay ku darayaan in dadka la xukumay ay ahaayee shan ruux,balse mid ka mid ah shaqsiyaadkaasi lagu waayay danbiga lagu eedeeyay...
Dowlada Soomaaliya oo Sgeegtay in ay Wax ka Qabanayso Xad gudubyada loo Geesto Haweenka.
Hogaamiyaasha ugu sarsareysa dowlada Soomaaliya ayaa sheegay in dowlada wax badan ay ka qaban doonto Kufsiga loo geysto haweenka Soomaaliyeed. Isagoo magaalada London kula hadlayay Al-Jazeera, Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shekh Maxamuud ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in dowladiisa wax badan ay ka qabaneyso kufsiga iyo xagudubyada inta badan lagula dhaqaaqo haweenka Soomaaliyeed,isagoona ku faanay Madaxweynaha...
AMISOM oo Baaq u direty Dhalinyarada ka bar bar dagaalama Alshabaab.
Saraakiisha ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa baaq udiray dhalinyarada kujira Ururka Al-Shabaab ee Dowladda iyo AMISOM dagaalka kala soo horjeeda. Afhayeenka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM Cali Aadan Xumad oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in dhalinyarada kujira Ururka Al-Shabaab ay siinayaan fursad qaali ah taasi oo ku aadan inay kasoo baxaan Ururkaasi. Cali Aadan Xumad ayaa sheegay...